Indlela yokwenza i-marble ngaphandle kokhonkolo: ubuchwepheshe. I-marble yokufakelwa kusuka ekukhoneni
I-marble yokufakelwa inobunzima obukhona ematheni engokwemvelo, kulula ukuyisebenzisa, okwenza kube lula ukunikeza umkhiqizo umbono oyifunayo. I-marble yokufakelwa ifudumele, iyathandeka ekuthinteni, inamandla okugqoka ukugqoka. Inzuzo eyinhloko ukuthi ukukhiqizwa kwayo kungenziwa ekhaya, kwanele ukutadisha ngokucophelela ubuchwepheshe bokufaka indawo enhle kakhulu yemarble yemvelo kusuka ekukhoneni.
Ukubhekana namatshe kungokwemvelo futhi kungokwemvelo. Ukufakelwa okubizwa ngokuthi yizinto ezitholakala kukhonkolo. Ukubukeka kwalo akufani neze nelitshe lemvelo. Ubuchwepheshe bokukhiqiza buhlukile. Kuye ngalokhu, lezi zinhlobo ezilandelayo zamatshe okufakelwa zihlukile:
Amatshe okufakelwa okwenziwa ngokhonkolo.
Kulesi sihloko, umbono wokugcina ucatshangelwa.
Ukusetshenziswa kwe-marble yokufakelwa
Lezi zinto zivame ukusetshenziselwa ukugoqa kwangaphandle kwezakhiwo. Isetshenziswe njengendlela ehlukile kumatayela e-ceramic ngamagumbi okugeza, phansi, ukwakhiwa kwama-countertops amatafula ekhishi, ama-washbasins kanye nezitshalo, izinyathelo, imithombo yokuhlobisa nezifanekiso, amabhange, amahhovisi kanye nezindawo zokubala, izindawo zokucima umlilo nezinye izinto eziningi. Izinto ezinjalo zihlotshiswe ngamapulangwe, zikhonza njenge-hotbed of induduzo endlini, futhi maduze - isibonakaliso sokuchuma nokunethezeka. I-marble yokufakelwa yokhonkolo, noma ikuphi lapho isetshenziswa khona, kuyisibonakaliso sokunambitheka okukhulu.
Itshe lokufakelwa. Kuyini ukuthandwa kwalo?
Ikhonkri elihlobisa, i-marble yokufakelwa, ikhonkri enemibala, itshe lokufakelwa, i-marble ehlobisa kuthiwa yinto efanayo, isisekelo sokukhiqiza singumxube we-sement-sand, obhekene nezimfanelo eziphakeme. Imikhiqizo evela kuyo inebuciko obuhle kakhulu.
Ngakho-ke, eyenziwe nge-marble ekhonkritha, ithola isicelo esiphezulu kakhulu ekwenzeni ukwakhiwa nokubhekene nemisebenzi.
Marble - impahla ekhethekile yemvelo, enikeza ubuhle nobuhle kunoma yisiphi isakhiwo. Muva nje, kuvame ukusetshenziselwa ngaphakathi kwendlu. Kodwa itshe lemvelo libiza, hhayi wonke umuntu unethuba lokulithenga. Ngakho-ke, ochwepheshe baye bathuthukisa ubuchwepheshe bokukhiqizwa kwemabula ebonakalayo kusuka ekukhoneni, ukubukeka kanye nekhwalithi yayo efana nelitshe lemvelo, elinamagugu alandelayo:
Ukuqedela amathayili kanye nezakhi zokuhlobisa ezenziwe ngamarabula okufakelwa zisetshenziselwa ukuhlobisa kwangaphakathi nokungaphakathi kwezakhiwo nezakhiwo.
Leli tshe aliyishisi, alihambisani nokushisa nomanje kagesi. Ngakho-ke, iyasetshenziswa kabanzi njengento yokuqeda ama-radiators, ama-ovens, ama-ovens, njll.
Iphikisana kakhulu namakhemikhali asekhaya, kuhlanganise i-acetone, i-petroli, ama-alkali nama-acids. Lokhu kungenxa yokwakhiwa kwezinto ezibonakalayo futhi kunikeza ukumelana kwamarabula okufakelwa ukushaqeka.
Imikhiqizo evela kuyo ayiziboli, ayiqhubeki, imelana nokungcola, igeza kalula ngamanzi alula.
I-marble enjalo ayinamanzi futhi inobungane kakhulu emvelo. Akukhipha izinto ezilimazayo.
I-marble yokufakelwa kusuka ekukhoneni kaningi izikhathi ezilula kunemvelo. Uma usebenza nayo, akudingeki ukuba uqhubeke nokuqinisa indawo okubekiwe kuwo.
Ukubukeka okuhlukahlukene. Ungenza imizwa engahle ematheni, uhlola ngemibala.
Ubuchwepheshe. Lokhu kusho ukuthi kulula futhi kulula ukuthola i-marble ngaphandle kokhonkolo.
Izindleko eziphansi kakhulu.
Ukwenza imabula ngekhrektha ngezandla zakho ekhaya, udinga ukubeka isitoreji:
Isihlabathi esinesisindo esihle.
I-Cement. Kungcono ukusebenzisa i-brand M500.
I-Pigment. Ngenxa yalokhu, ukudweba kwamafutha kufanelekile.
I-plasticizer eyongezwa kukhonkolo ukuze ukwandise izici zayo.
Amafomu okuthululela isixazululo kubo. Kungcono ukusebenzisa i-polymeric ekhethekile. Uma bengenakukwazi ukuthenga, noma yiziphi izinsimbi zeplastiki ezizokwenza. Amafomu angenziwa ngokuzimela ngokugxilisa ama-panels epulasitiki.
Ithebula lokuguqulwa kwe-compact of solution. Khona-ke ukwaziswa kuyoba mnandi kakhulu. Kodwa uma uhlela ukwenza imabula ngekhrekheni kanye, ungenza ngaphandle kwalo. Ingxube ishukunyiswa ngesandla.
Izinhlobo zengxube yekhonkrithi yokukhiqizwa kwemabula yempahla
Ukumiswa ngesanti kuhlanganiswe ngokulinganisela okulinganayo ngesisindo. Inhlanganisela enjalo isetshenziselwa inzalo yezitini kanye nezivimbe ze-foam.
Enye ingxenye yesimende ixubene nezingxenye ezimbili zesihlabathi (ngesisindo). Kusukela kule ngxube, ukubhekwa kwamatayela nemikhiqizo yokuhlobisa kukhishwa: ama-windows sills, izinyathelo, ama-baluster nokuningi okuningi.
Inhlanganisela yesimenti esisodwa kanye nezingxenye ezintathu zesihlabathi (ngesisindo) sisetshenziselwa ukukhiqiza amathayili emigwaqweni yasendleleni, ama-curbs, ama-slabs ase-socle.
Ubuchwepheshe bokukhiqiza kweMarble
Ngemuva kokulungiselela zonke izinto ezidingekayo, ungahlala phansi ngokuphepha ukuze usebenze. Ukukhiqizwa kwe-marble kusuka ekukhoneni kuqala ngokulungiselela udoti. Kufanele ixoxwe ngo-1: 3 isilinganiso. I-filler engcono kakhulu amagugu amancane. Nakuba ungasebenzisa ezinye izithasiselo: ubumba obunwetshiwe, izikhumba ze-ceramic, ipumice.
Ubuchwepheshe be-marble kusuka kukhonkolo buhlanganisa izenzo ezilandelayo:
Idayi yengezwa kwisisombululo esiphelile. Inqubo yokuvuselela yayo ayidingi ukukhuthala okukhulu. Ngokuphambene nalokho, ingxube ehlukumezayo enezilinganiso ezihlukanisayo ifana kakhulu nemabula. Ungaqhuba ukuhlolwa futhi wengeze ekupheni kwesikhala semibala ehlukene. Lesi sigaba somsebenzi silungile, sivula amathuba angenamkhawulo wokubonakalisa umcabango womuntu.
Ngemuva kokudweba isixazululo, kufanele sishukunyiswe noma sibekwe kuthebula eliduduzayo, uma unalo.
Khona-ke isixazululo sithelwa esibubunjini futhi sigcwele ifilimu ye-polyethylene. Ukwandisa amandla wezinto, kufanele kuqiniswe, lapho i-wire ithululelwa khona kwisisombululo esilahliwe.
Ngemuva kwe-marble etholakala ekuqinisweni kwekhonkri, isusiwe kusukela ekubunjweni futhi ubuso bubekwe phansi nge-angle grinder ne-diamond disks. Ubuso buba bushelelezi futhi bufana nemabula yemvelo.
Marble of ukhonkolo, eyenziwe ngesandla
Ifomu le-polyurethane ligcwele ingxenye eyodwa yesimiso esomile nezingxenye ezimbili zesanti ezihlanjulisiwe kahle, ngemva kokusihlunga.
Sengeza amatshe amancane, ama-marble chips noma enye into yokugcwalisa. Konke ukuxuba.
Okulandelayo, thatha ama-dyes ambalwa bese ufaka kancane kancane ingxube eyomile. Ngakho-ke, i-pigment eyengeziwe ingakusiza ukuthi uthole izindawo ezihlukene, izitshalo, amabala, amachashazi. Idayi kufanele ibe yi-1% yesisindo somswakama owomile.
Engeza amanzi: izingxenye ezingu-0.2 ngesisindo somxube owomile. Okokuqala, ithululela u-80% wevolumu yetshezi, futhi konke kuhlanganisiwe. Engeza i-plasticizer ngesilinganiso se-1% senhlanganisela, uphinde uvusa. Ngemuva kwesigamu ngomzuzu isixazululo sizoba ipulasitiki bese "sondela". Ngemva kwalokhu, uthele amanzi asele bese uxuba. Gcoba isikhunta ngenhlanganisela ye-polyethylene bese ushiya ukuze ushiswe. I-Marble yekhonkrithi, ezobuchwepheshe bokukhiqiza obuhlolwe ekhaya, bukulungele.
Yini okudingeka ukwazi uma uqhuba indlu eyenziwe ngekrektha ekhishwe yiwe ngokwakho?
Idivayisi yokudonsa kwisayithi ngezandla zomuntu siqu - ubuchwepheshe
Elegance, warmth kanye nenduduzo
Kungani amadoda ingagijima ngejubane elidlula abesifazane?
Uchungechunge mayelana abashayeli bezindiza basekhaya nabamazwe angaphandle
Negesi isibhamu "M2 Beat": ukubuyekezwa kanye ukulungiswa
Dragon Male + dragon zesifazane: Oluvumelana sici
Cubes Sikhungo ngezandla zabo: incazelo protsesa
Indlela yokukhetha amagama amantombazane. Izinketho zanamuhla
Salad "bethanda Male": ongakhetha ukupheka